Safarka Xilliga Uurka
Xaaladaha badankood, bukaanka uurka leh waxay safri karaan illaa 36 toddobaad illaa iyo inta ayan wax dhibaato ah qabin oo ay fahmaan halista ku lug leh. Waa u muhiim bukaanada uurka leh inay ogaadaan in dhibaatooyinka qaar ka dhalan karaan digniin la'aan safarka wuxuu u baahan karaa inuu helo daryeel caafimaad oo ka fog bixiyaha ay yaqaanaan. Waqtiga ugu fiican ee la safri karo waa uurka dhexe (14-28 toddobaad) maxaa yeelay astaamo badan oo uur ayaa yaraaday adiguna waxaad noqon doontaa midka ugu raaxada badan.
Safarka Ugu Horeeya Muddada
Inaad ka soo safarto in ka badan laba saacadood gurigaaga ka hor intaan ultrasound-kaaga kuugu horreeya la aasaasin uur ku dhaca ilmo-galeenka laguma talinayo. Inta lagu jiro waqtigan waxaad halis ugu jirtaa dhicis, uur-ku-jirta ilmo galeenka, iyo dhiig bax isku-arag ah. Sidoo kale, jirkaagu wuxuu la jaanqaadayaa uurka waxaadna la kulmi kartaa casiraad, daal fara badan, lallabbo, iyo matag.
Safarka Labaad ee Bilaha ah
Marka uurka intrauter-ka la aasaaso, safarka inta lagu jiro waqtigan guud ahaan waa amaan. Haddii aad leedahay mid ka mid ah arrimaha soo socda ee halista uurka, fadlan la tasho bixiyahaaga ka hor intaadan sameynin qorshe kasta oo socdaal:
Afka ilmagaleenka oo aan karti lahayn.
Taariikhda ama foosha hadda jirta.
Taariikhda dillaaca dhicis ee xuubka.
Taariikhda ama dhibaatooyinka mandheerta ee hadda jira.
Nabarka siilka / dhiig baxa.
Taariikhda sunta ama sunta hadda jirta, preeclampsia, dhibaatooyinka cadaadiska dhiigga.
Taariikh ama sonkorowga uurka ee hadda jira.
Da'da Hooyada Sare (ka weyn 35) ama ka yar da'da 15 sano.
Haddii aad qabto wax dhibaato ah oo aan ku jirin liistadaan, fadlan la tasho adeeg bixiyahaaga intaadan safrin.
Safarka Saddex Biloodlaha ah
Haddii aadan wax dhibaato ah qabin, ku safridda illaa 36 toddobaad baabuur ama hawad waa la aqbali karaa illaa iyo inta aad ka warqabto halista ka imaan karta. Dhibaatooyinka ay ka mid yihiin dhiig-karka, foosha ka hor, iyo dillaaca xuubka oo deg-deg ah ayaa badanaa yimaada digniin la'aan waxayna u dhici karaan si dhakhso ah oo u baahan daryeel caafimaad. Haddii aad tahay 36 toddobaad ama ka badan kuma talineyno inaad ka dhoofto meel ka fog laba saacadood baabuur gurigaaga. Safarka hawada ka dib 36 toddobaad laguma talinayo. Markaad go aan ka gaarto safarka waa inaad qaaddaa taxaddarradan soo socda:
Ballan ka sameyso bixiyahaaga dhowr maalmood ka hor safarka.
Nuqul ka mid ah xaashida wejiga hore ee uurka ku sii qaado safaradaada.
Nuqul kaarkaaga caymiskaaga caafimaad wata.
Meel ka hel goob caafimaad oo u dhaw meesha aad u socoto haddiiba xaalad degdeg ahi timaaddo.
Ha ku joogin gaariga dhexdiisa ama hawadiisa, waxaa muhiim ah inaad socotid labadii saacadoodba mar.
Dr. Carrie Soder Dr. Erika Boothman Dr. Amy W. Rahl Dr. Ann Marie Wurst Dr. Alexandra Schueler Dr. Joanna Buell Dr. Kevin Hackett Dr. Lauren Sagaria Goobta Columbus Goobta Dublin Goobta Westerville